Wiricheya | KarmanHealthcare.com% wiricheya
Category Archives: hwiricheya
Mawiricheya asingaremi, Retail, hwiricheya, Wiricheya Nhau, kufamba newiricheya
Posted on January 27, 2021 August 31, 2021 by csr 1686
Mawiricheya, maWheelchair emagetsi, mobility scooters, uye zvimwe midziyo yekuremara zvinogona kudhura. Naizvozvo, vanhu vazhinji vanoomerwa nekukunda mutengo wekuwana iyi michina muAmerica. Sezvineiwo, kune akati wandei ekubatsira mawiricheya anowanikwa kubatsira kubhadhara mutengo wakakura weWheelcheirs nezvimwe zvekufambisa. Grant inzira yakajairika yekuwana maWheelchairs […]
Posted in Mawiricheya asingaremi, Retail, hwiricheya, Wiricheya Nhau, kufamba newiricheya	| Tagged kuremara, isina kurema wheelchair, asingaremi mawiricheya, wiricheya, nhau dzewiricheya, kufamba newiricheya, wiricheya mushandisi, mavhiripu
Posted on January 20, 2021 January 22, 2021 by csr 1688
Kuzvimirira mukufamba ndechimwe chezvinhu zvakakosha zvehupenyu hwepamusoro kune vanhu vakaremara. Verenga pazasi kuti uwane rumwe ruzivo nezve mawiricheya muUnited States. Sei Mawiricheya Akakosha Kwazvo? Kufamba kwakazvimirira kunogona kuwanikwa nemhando dzakasiyana siyana dzemafambisirwo ane chekuita nekufamba. Nekudaro, zvinhu zvakaita semidziyo yesimbi, ma orthotics ane simba, […]
Posted in Mawiricheya asingaremi, Retail, hwiricheya, Wiricheya Nhau, kufamba newiricheya	| Tagged kuremara, isina kurema wheelchair, kufamba, wiricheya, nhau dzewiricheya, mavhiripu
Posted on January 19, 2021 January 19, 2021 by csr 1688
Chii chakakosha kuziva nezve mawiricheya? Gore rega rega mumaParalympics, vazhinji vedu tinosvika pakupupura pamwe nekusangana nemitambo inoshamisa yemitambo mukati memavhiki anotevera. Iko nekuda kwezviitiko zvakadaro izvo, kune imwe nhanho, kuremara iko zvino kwave kutariswa kazhinji nevazhinji vedu. Asi, pane […]
Posted on January 12, 2021 January 13, 2021 by csr 1688
Unoda kudzidza, maitiro eKukodzera kune SSD Mabhenefiti Mushure meSpinal Cord Injury? Gore roga roga kune zvinopfuura 17,000 kukuvara kwemusana. Dzakawanda dzinokonzerwa netsaona dzakaita setsaona dzekudhivha kana tsaona dzemotokari. Muzviitiko zvakawanda, kukuvara kweSpinal Cord kunoguma nekukuvara zvachose kunoita kuti kushanda kusagoneke. Chero ani anga achishanda kana ane […]
Mawiricheya asingaremi, hwiricheya, Wiricheya Nhau, kufamba newiricheya
Posted on January 5, 2021 January 13, 2021 by csr 1688
Zvinoita here kubatana nemhuka muwiricheya? Mhuka dziri muwiricheya dziri kuve inowedzera kuve inozivikanwa pfungwa. Ikozvino kune zviitiko zvembudzi, hwai, nguruve, tsuro, mini bhiza, uye kunyangwe mhumhi uye inovhara pamakumbo. Mhuka dzakaremara dzinoda mawiricheya kana imwe mhando yemidziyo yekufambisa kuti zvikwanise ku […]
Posted in Mawiricheya asingaremi, hwiricheya, Wiricheya Nhau, kufamba newiricheya	| Tagged isina kurema wheelchair, kufamba, anogara pazvigaro, wiricheya, nhau dzewiricheya, mavhiripu
Posted on December 29, 2020 January 13, 2021 by csr 1688
Makambani eWiricheya anoona akawanda mabasa akarasika gore rino kupfuura nakare kose. Isu tinotora nzira yakawedzera pano yemushumo we2020-2026. Hongu Ndizvozvo. Tichafanira kutarisa kune ramangwana makore mashanu. Kubva 5 yanga iri nyaya yakaipa kwazvo munhoroondo. Denda rakakonzera kufa kwe2020% […]
Posted on December 28, 2020 December 28, 2020 by csr 1688
Ngatiitei zvakadzika zvakadzika pamusoro pekuti uve sei mushandisi wewiricheya mushandisi. Munyika izere nezvikafu zvinonaka zvisina hutano, kugara uine hutano haisiyo nzira iri nyore yekutora. Saizvozvowo, kuva mutano semunhu anoshandisa wiricheya munyika yezvikafu zvinonaka zvisina hutano ndiyo yakatove yakaoma kurarama. Dambudziko rakajairika […]
Posted in Mawiricheya asingaremi, Retail, hwiricheya, Wiricheya Nhau, kufamba newiricheya	| Tagged kuremara, isina kurema wheelchair, asingaremi mawiricheya, kufamba, wiricheya, nhau dzewiricheya, mavhiripu
Posted on December 18, 2020 December 29, 2020 by csr 1688
Teerera kuna Jingle Mabhero akaitwa naBlob Opera. Wobva waridza ina opera manzwi kuti ugadzire yako yekuumbwa? https://t.co/3JzaP1hhF7 kuburikidza @googlearts - Karman Healthcare (@KarmanHC) Zvita 17, 2020 Yakatumirwa naKarman Healthcare Inc. neChishanu, Zvita 18, 2020 Tamba pafoni yako nenjere izvozvi! Zvakanaka chaizvo
Posted in Mawiricheya asingaremi, Retail, hwiricheya, Wiricheya Nhau, kufamba newiricheya	| Tagged isina kurema wheelchair, kufamba, anogara pazvigaro, wiricheya, nhau dzewiricheya, mavhiripu
Retail, hwiricheya, Wiricheya Nhau, kufamba newiricheya
Mudzanga Kana Kuvhiringidza: Ndeupi Asinganyanyo Kukuvadza Kwauri?
Posted on December 16, 2020 December 16, 2020 by csr 1688
Wanga uchifunga kuti kufema hakuna kukuvadza iwe pane izvo zviviri? Zvakanaka, imi mose makarurama uye makanganisa. Zvidzidzo zvenguva zvakaratidza kuti kune mashoma mashoma emuchetura mukuputika. Asi vazhinji vari kutora mukana wechigadzirwa. Chikonzero chaicho chekuti vanhu vari kuchinjira kumhepo ndiko kuwedzera […]
Posted in Retail, hwiricheya, Wiricheya Nhau, kufamba newiricheya	| Tagged kusvuta, vaping, nhau dzewiricheya, kufamba newiricheya, mavhiripu
Kufamba mune akanyanya Wiricheya Akanaka Maguta
Posted on December 15, 2020 December 16, 2020 by csr 1688
Ndeapi maguta epasiricheya ane hushamwari munyika? Kana zvasvika pakufamba newiricheya-inofadza, hadzisi nzvimbo dzese dzine mukana wekuwana pamwe nharaunda. Mamwe maguta kutenderera pasirese akaita nhanho dzinoyemurika kuenda. Nekudaro kuve kuwanikwa uye kuwana kutendwa kwevashanyi vemawiricheya vashandisi. Kana iwe uchida kusvetuka kune edu atinofarira, vhidhiyo […]
Posted in Mawiricheya asingaremi, hwiricheya, Wiricheya Nhau, kufamba newiricheya	| Tagged isina kurema wheelchair, wiricheya, nhau dzewiricheya, kufamba newiricheya, wiricheya mushandisi, mavhiripu